Momba anay - Qingdao Yi Xinyan International Trade Co., Ltd.
Fanandramana mihoatra ny 20 taona amin'ny bearings sy ny menaka
Shining Industry China, manana orinasa telo izahay hanomezana tolotra tsara indrindra.
Izahay dia mitondra sy manosotra tsena anatiny mihoatra ny 20 taona.
Mitondra vokatra tsara kokoa eto amin'izao tontolo izao no tanjontsika. Nametraka orinasan-tsolika fanondranana vokatra lehibe any Qingdao Port izahay.
Qingdao YIXINYAN varotra iraisam-pirenena., LTD ny marika BXY, vokatra lehibe dia fitaterana ondana ondana, marika iray hafa SKYN, ny vokatra lehibe indrindra dia menaka fanosotra.Qingdao QINGHENG mitondra co., Ltd ny marika QHW, vokatra lehibe dia bearings baolina sy bearings.Qingdao SENZEXIANG iraisam-pirenena varotra co., Ltd ny marika SZX , ny vokatra lehibe dia ny insulator.
Ny orinasanay dia nametraka ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famolavolana, ny famokarana ho iray amin'ireo orinasa avo lenta, hery ara-teknika matanjaka. Ny orinasa dia manana fitaovana fitiliana fanandramana manokana sy mandroso manokana, milina fitotoan'ny CNC, fiakarana avo lenta ho an'ny vokatra avo lenta ary mametraka fototra mafy orina.
Ny orinasa dia mifikitra amin'ny kalitaon'ny fotony, tanjona kendrena mifantoka amin'ny kalitao, ho an'ny ankamaroan'ny mpanjifa vaovao sy taloha hanome vokatra kalitao, marika fanta-daza hamoronana indostria mitondra menaka fanosotra sy solika. Miarahaba tanteraka ireo mpandraharaha eto an-toerana sy avy any ivelany izahay hiady hevitra momba ny fiaraha-miasa sy ny fampandrosoana iraisana.
Ny vokarin'ny orinasako dia amidy amina firenena 20 mahery, toa an'i Eropa, Amerika, Afrika, Azia atsimo atsinanana ary firenena hafa.
Ankehitriny ny vokatra lehibe ao amin'ny ozinina dia afaka manao solosaina fanondranana entana mavesatra, fa tsy ny fametrahana mazava tsara. Ny orinasa any Liao Cheng City, ny kalitao rehetra mitondra mifanaraka amin'ny fitantanana rafitra kalitao ISO9001, iray amin'ireo orinasa fanondranana varotra ivelany. Ankehitriny isika dia afaka manome Pillow Block Bearing, Deep Groove Ball Bearing, Spherical Roller Bearing, Tapered Roller Bearing, Cylindrical Roller Bearing, Thrust Ball Bearing ary vokatra hafa amin'ny famokarana sy ny fampiharana. Ny marika famantarana ny orinasa "BXY", "FXY", "QHW" "SKYN" dia nanolo ny vokatra hafarana. Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny masinina avo lenta, vy fikosoham-bary, fitrandrahana arintany, fisandratana, tanimbary, herin'ny rivotra, fiara mandeha, taratasy ary indostria hafa, ireo mpanjifako vaovao sy taloha rehetra liana amin'ny vokatray.
Izahay koa dia mifampiraharaha amin'ny orinasa matavy isan-karazany toy ny gropy kalsioma, ny menaka fanosotra amin'ny lithium sarotra, ny menaka fanosorana hafanana avo sns. Ny ekipanay rehetra, mitazona ekipa injeniera matihanina manana traikefa manan-karena amin'ny fivoaran'ny vokatra petrochemical, manandrana mahita fotopoto-pitsipika mekanika momba ny fikorontanana mekanika ary miasa amin'ny fampandrosoana, famokarana, varotra ary serivisy fanosotra menaka fanosotra, mikendry ny hanomezana vokatra ho an'ny mpanjifa matihanina ary vahaolana voarindra sy fanomezana serivisy ho an'ny mpanjifa amin'ny indostria mihoatra ny 120 hahatonga ny fitaovan'ny mpanjifa tsy ho mora mifanditra sy hihosotra kokoa!
· Maherin'ny 10 taona ny traikefa matihanina amin'ny maha mpanamboatra menaka manosotra diloilo anay.
· Manana ekipa mpikaroka sy mpikaroka mafimafy izahay hamahana ireo olana amin'ny menaka.
Izahay manokana momba ny tanjona fiaraha-miasa mandresy indroa, no safidy voalohany indrindra, ianao hifehezana ny tombom-barotra izay miziriziry amin'ny kalitao, izahay no mpamatsy anao azo antoka, nanantitrantitra ny serivisy izahay, no safidy voalohany ho anao te hiara-miasa maharitra, ny ekipanay dia manana ny hetahetam-po indrindra
Tsy mpiara-miasa fotsiny isika fa mankafy fihaonana, ka manana andraikitra hihazona ny fifandraisana tsara. Izahay dia manizingizina ny hoe: «Manaova varotra tsara, mifampiraharaha amin'ny vidiny mirindra.